10ka ugu sareeya waa inay lahaadaan barnaamijyadooda iPhone Photo | Martech Zone
Anigu ma ihi sawir qaade weyn oo kamarad xirfadeysan wadata ayaa madaxayga kor martay, sidaa darteed waxoogaa waan khiyaameeyay anigoo isticmaalaya iPhone-kayga iyo codsiyada aan ugu jeclahay qaarkood. Laga soo bilaabo dhinaca suuq-geynta, siinta sawir toos ah shaqada aan qabaneyno, meelaha aan booqaneyno, iyo nolosha aan ku nool nahay waxay ku dareysaa heer daah-furnaan ay macaamiisheenna iyo kuwa raacsan ay ku raaxeystaan.
Si loola macaamilo beesheena, sawirradu waxay ahaayeen furaha. Waxaan ku dhiiri galin lahaa shirkad kasta inay shaqaalaheeda la wadaagto! Halkan waxaa ah burburka barnaamijyada aan ugu jeclahay iPhone.
Haa, waan ogahay in kamaraduhu ay la socoto macruufka laakiin ikhtiyaarka ah in la qaado sawir muuqaal leh waa mid cajiib ah. Si aad u qaadatid sawir muuqaal ah, dhagsii badhanka xulashooyinka markii kamaraddaadu furan tahay. Kani waa sawir aan ka qaaday riwaayad aan dhawaan tagay.
Ma jiro codsi kale oo sawir ah oo ka dhigaya mid aad u fudud in lala wadaago sawirrada bulsho ahaan. Waan jeclahay inaan si toos ah ugu riixi karo sawir Twitter, Facebook iyo Foursquare si toos ah barta Instagram halkii aan ugaarsan lahaa oo aan sawirada kula heli lahaa barnaamijyada kale. Awoodda la dhisay ee lagu dabaqi karo miirayaasha iyo nacaybku waxay kaa dhigi karaan inaad u ekaato pro!
Waxaa jira astaamo qaar oo kamaradda aasaasiga ahi aysan u oggolaanayn kuwa xiisaha leh, sida ku darida saacad iyo qaadashada sawir. Camera + waxay leedahay aalado aan caadi aheyn oo kaa caawinaya inaad sifeeyo, diirada saarto oo aad ugu darsato cadeynta sawirada aad qaadaneyso, iyo waliba awooda toosinta. Waa qalab adeegsi loo dhisay hiwaayadda!
Grid Lens ayaa kuu oggolaaneysa inaad sawirro uruuriso oo aad isugu keento hal sawir. Waad dooran kartaa oo aad habeyn kartaa qaabeynta, ka dibna mid kasta oo ka mid ah sawirrada ka qaad adigoo gujinaya barta, ka dibna badbaadin, wadaag ama email u soo dir sheyga dhammeeyey. Tani waxay ka dhigaysaa wadaagista wax yar ururinta mid fudud oo fudud!
ColorSplash wuxuu kuu ogolaanayaa inaad midabka ka saarto qaybo ka mid ah sawir aad qaadatay. Barnaamijku waa mid si fudud oo fudud loo isticmaali karo - kaliya balaadhi sawirka oo jiido fartaada meesha aad rabto inaad ka tirtirto midabka. Sawirka la dhammeeyay wuxuu runtii umuuqan karaa mid cajiib ah - kani waa mid ka mid ah wiilkayga iyo saaxiibtiis oo qoob-ka-ciyaaraya.
Weligaa ma yeelatay sawir weydiistay qoraal? Taasi waa waxa loogu talagalay… siinta giraangir hagaagsan oo qabow oo kuu oggolaanaya inaad ku darto qoraal qurux badan sawirkaaga daqiiqado gudahood.
Snapseed wuxuu kuu soo bandhigayaa qaar ka mid ah miirayaasha xiisaha leh iyo aaladaha tafatirka caadiga ah ee sawirkaaga. Xakamaynta xadidan ayaa ah mid layaableh isla markaana isticmaalku waa mid casri ah.
Qase wuxuu sameeyaa uun waxa ay dhahdo… taasoo u oggolaaneysa awoodda isku dhafka sawirro badan. Waa tan iskudhafka Chicago… oo magaalada ku dhex kaxaynaya hoosna u fiirinaya.
Waxaa ku taliyay Nat Finn, Xitaa ma aanan ogeyn in Aviary uu lahaa codsiyada iOS. Waxyaabaha layaabka leh ayaa ah inaan ku raaxeysanayo dalabka iPhone-ka oo aad uga wanaagsan qaabka webka! Aviary wuxuu leeyahay tan muuqaalo, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay stickers taas ayaa loo isticmaali karaa in lagu daro dhawaaqyada (ama shaaribbada) sawirkaaga.
Photoshop Express ee iPhone
Talo soo jeedin kale oo ka timid Nat iyo mid ay ahayd inaan ku daro… Photoshop Express. Tafatirka xirfada leh ee aad ku gaari karto Photoshop Express waxaa laga heli karaa qaar ka mid ah aaladaha kale ee kor ku xusan, laakiin sahlanaanta isticmaalka waa mid laga naxo. Kudar miirayaal, muraayadaha iyo saamaynta xoogaa waxbadan oo runtii waxaad heshay suite tafatir sawir fiican.
Ma haysaa barnaamijyo kale oo iPhone ah oo aad u fiican in la isticmaalo?
Tags: blenderkamarad +midabbomuraayadaha indhahaImageimagesiphoneka badansawirosawirloola cararay
36 Xeerarka Warbaahinta Bulshada
Sida Loogu Dhiso Magacaaga Internetka
Nov 17, 2012 saacadu markay tahay 1:56 PM
Aviary. Waa wax walba oo ku saabsan sameeyaha meme. Oo waxay leedahay cillad iyo qalab dib-u-hagaajin laakiin waxa dhabta ah ee ku habboon ee ku saabsan waa in ay leedahay isku xirnaan. Facebook, twitter, flicker… hal mar. Ku dhowaad sida qabow ee Instagram
Hadda, kuwii ugu horreeyay ee ii oggolaaday inaan ku biiro bogagga Facebook ad google oo lagu daro WINS!
Nov 17, 2012 saacadu markay tahay 2:09 PM
Macaan! Xitaa ma aanan ogeyn inay leeyihiin barnaamij mobilo ah!
Nov 18, 2012 at 3: 10 AM
haa. waa wax fiican Lacag bixis ah, laakiin kan sameeya qoraalka iyo qoraalka gelinta wuxuu ahaa mid aan qiimo lahayn. Sidoo kale Photoshop Express iyo InstaPicFrame oo okay ahaa. Aviary waxay laheyd wadaagida ugufiican.
29, 2012 at 10: 40 PM
Ka eeg barnaamijkeenna cusub ee iPhoneography, Hipsta Hipster Cam at http://www.hipster-camera.com Waxaan u maleyneynaa inaan si quruxsan u qaboojineyno barnaamijka caadiga ah ee sawir qaadista iphone adoo wata shaandhooyin asal ah oo aan xadidneyn oo lagu abuuray duulimaadka.
Waxaan u maleynayaa in qoraagu iloobey inuu ku daro 'Camera Zitrr'. Waxaan u maleynayaa inay aad uga fiican tahay kamarad + ama Instagram… sidoo kale, barnaamijyada halkan ku yaal qaarkood ma wanaagsana: /
Barnaamijyo wanaagsan! Laakiin sidoo kale waa inaad hubisaa Auto Colorize Pro
Macluumaadka ugu Fiican iPad-ka Tafaftirka iPad-ka Instafusion-ka ayaa ah Barnaamijyada Tifaftirka Sawirka ugu Fiican iyo Barnaamijyo Cajiib ah oo lagu tafatiro sawirrada iPhone-ka !!!
Febraayo 26, 2014 saacadu markay tahay 6: 46 AM
aan ugu jeclahay waa barnaamijka cuntada
Wali ma aragtay macaan Pix! Runtii fikrad qabow.